Ampidino Nitro Reader ho an'ny Windows
Ampidino Nitro Reader
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (1.60 MB)
Ampidino Nitro Reader,
Nitro Reader dia programa iray misongadina miaraka aminny interface interface-friendly izay ahafahanao mamaky sy manova rakitra PDF.
Miaraka aminilay programa, izay misy interface tsotra sy mora ampiasaina dia manjary mahazo aina tokoa ny manodina rakitra PDF. Azonao atao ny manokatra rakitra PDF aminny alàlanny alàlanny mpikaroka rakitra aminny programa na ny fomba fitarihana sy fitetezana.
Azonao atao ny mamonjy ireo lahatsoratra soratanao aminny programa ho PDF. Azo atao koa ny mizara ny fisie PDF aminny alàlanny mailaka na manonta azy ireo.
Ny fahafaha-manao zoom sy mivoaka ny antontan-taratasy vakianao aminny alàlanny fampisehoana zoom, manampy ny kopianny sonianao mando aminny antontan-taratasy, manampy ny fanamarihana ao anaty fisie dia singa iray hafa ilaina aminny programa.
Ny programa izay manamora ny asanao aminny fanovana karazana rakitra samihafa (toy ny DOC, DOCX, HTML, TXT, BMP, JPG, WMF) ho endrika PDF dia atolotra maimaim-poana.
Nitro Reader Specs
Haben'ny rakitra: 1.60 MB
Fanavaozana farany: 20-07-2021
Ny famoahana ny kinova anny Microsoft Office 2010, Microsoft dia nanolotra ny rindrambaiko...
Tonian-dahatsoratra PDF infix dia mamela anao hanokatra, hanitsy ary hitahiry tahirin-kevitra...
Izy io dia programa tsara ahafahanao mahita ny lisitry ny zavatra tokony hatao isanandro sy ny...
HandyCafe dia programa cafe internet maimaimpoana tanteraka izay nampiasaina tany aminireo kafe...
Microsoft dia nanambara ny Microsoft Office 2013, ny andiany faha-15 anny Microsoft Office, izay...
Simple Notes Organizer dia fampiharana maimaim-poana mamela anao hanisy naoty miraikitra aminny...